NDỊ Kazakstan anaghị ebi otu ebe. Ruokwa taa, ha ka na-achịrị ụmụ anụmanụ ndị ha na-azụ na-aga ebe ọ bụla ahịhịa ndị ha ga-ata dị. N’oge ọkọchị, ha na-anọ n’ebe jụtụrụ oyi, ya bụ, n’ebe ugwu ugwu na-azụ anụmanụ ha. N’oge oyi, ndị Kazakstan na-achịrị ụmụ anụ ha gbadata n’ebe e nwetụrụ okpomọkụ.
E nwekwara ụfọdụ ndị Kazakstan bi n’obodo mepere emepe. Ma n’agbanyeghị nke ahụ, omenala ha, nri ha, na ihe ndị ha na-emepụta ka na-egosikwa na ndị nna nna ha ochie bụ ndị nkwagharị. Ndị Kazakstan nwekwara ọtụtụ egwu na abụ ndị ha rọrọ ha na-eji ngwá egwu ọdịnala ha na-akụ.
E nwere otu ụlọ ndị obodo a na-arụ a na-akpọ yurt. Ha weere ụlọ a ka ihe na-egosi na mmadụ ji ala obi na ya kpọrọ ihe. Ndị na-azụ anụmanụ ka na-ebi n’ụdị ụlọ a, ma, ndị bi n’obodo mepere emepe na-anọ n’ụlọ a eme ememme ndị pụrụ iche. Ọtụtụ ndị si mba ọzọ bịa ilegharị anya na Kazakstan na-enwekwa mmasị ibi n’ụlọ a. Onye banye n’ime ụlọ a, ọ ga-ahụ na ụmụ nwaanyị ndị Kazakstan bụ ndị aka siri ike ma a bịa n’ịkpa ákwà, ute na kapet ndị mara mma.
Otú ime ụlọ yurt dị
Ndị bi n’ime ime obodo Kazakstan anaghị eji ịnyịnya ha egwuri egwu. Ma ọ dịghị ihe ọzọ, e nwere aha iri abụọ na otu ndị Kazakstan na-akpọ ịnyịnya, aha nke ọ bụla nwere ihe ọ pụtara. Ihe nke ọ bụla pụtara dịtụkwa iche n’ibe ya. E nwekwara ihe karịrị okwu iri atọ e ji akọwa ụcha akpụkpọ ahụ́ ịnyịnya. Ịnyịnya mara mma na-ada ezigbo ọnụ, bụrụkwa onyinye e ji akpọrọ ihe. N’ime ime obodo, ụmụ nwoke na-amụ ịgba ịnyịnya mgbe ha dị obere.
Anụ na-adịkarị ná nri ndị Kazakstan. Ha anaghị etinyekarị ihe ndị na-eme ka nri tọọ ụtọ na nri ha. Otu n’ime ihe ọṅụṅụ na-amasịkarị ndị Kazakstan bụ koumiss. A na-eji mmiri ara ịnyịnya eme ya. E kwukwara na ọ na-edozi ahụ́. Ihe ọṅụṅụ ọzọ bụ shubat. Ọ na-atọ ka ọ gbatụrụ ụka, na-edozikwa ahụ́. Ọ bụ mmiri ara kamel ka e ji eme ya.
Alaka ụlọ ọrụ Ndịàmà Jehova dị n’Almati, na Kazakstan. Ha na-anabatakwa onye ọ bụla chọrọ ịbịa legharịa anya.
A ma agụ owuru a na-ebi n’ebe snoo dị ama maka ịna-ezokarị onwe ya. N’oge ọkọchị, ọ na-agbago n’elu elu ugwu ndị dị na Kazakstan ga nọrọ
Ọ dịkarịa ala ihe dị ka ụdị okooko osisi tulip ọhịa iri atọ na isii na-eto n’ọhịa ndị Kazakstan. Ihe osise okoko osisi a jukwara n’ihe ndị Kazakstan na-emepụta.
Otu osimiri dị na Kazakstan aha ya bụ Balkhash na-atọ nnu nnu n’ebe ọwụwa anyanwụ ya, ma, n’ebe ndịda ya, ọ fọrọ obere ka nnu ghara ịdị na ya.
A ma ndị obodo a ama maka iji ugo azụrụ azụ achụ nta. Ndị Kazakstan bụ ọká n’ịzụ ugo ndị ahụ na-acha edo edo, ha ejighịkwa ya egwuri egwu ma otu.
Ihe a e ji kechie ugo a anya na-eme ka ọ ghara ịtụ mmadụ ụjọ
ASỤSỤ HA: KAZAK NA RỌSHỊAN
MMADỤ OLE BI NA YA: 17,563,000
ISI OBODO YA: ASTANA
IHU IGWÉ: Ọ NA-EKPE ỌKỤ N’OGE ỌKỌCHỊ, NA-ATỤ EZIGBO OYI N’OGE OYI